Nzira yekuziva sei kana mumwe wako ariwo shamwari yako yepamoyo | Bezzia
Maria Jose Roldan | 11/05/2022 22:32 | Hukama
Pfungwa yemweya wemweya chimwe chinhu chinoshuvira munhu wese muhupenyu hwake. Kukwanisa kubatana nemumwe munhu padanho repamoyo uye rine chekuita uye kuve nekubatana kwechokwadi ndiko kunonzwisiswa serudo rwechokwadi. Kuita kuti mudiwa ave shamwari yako yepamoyo chinhu chisingaitiki muhukama hwese. Ichi chokwadi chakakosha kana chinongedzo chakagadzirwa chinogara nekufamba kwenguva.
Muchinyorwa chinotevera tinokupa akatevedzana makiyi kuti uzive kana mumwe wako ariwo shamwari yako yepamoyo.
Makiyi ekuziva kuti mumwe wako ishamwari yako yepamoyo
Pane nhevedzano yezviratidzo kana zviratidzo zvinogona kuratidza kuti vaviri ava ishamwari yepamoyo.
Rudo rwakavakirwa paushamwari runoumba chisungo chakasimba umo tsika dzinokosha dzakadaro dziripo. sekuvimba, kuremekedza kana rudo. Zvese izvi zvinoita kuti kunzwa kwemufaro kugadzirwe muhukama, izvo zvakakosha kuti vaviri vacho vave vakasimba uye vatsungirire kunyangwe nekufamba kwenguva.
Rudo nechidakadaka muvaviri ava hazvienderani zvachose nekusawirirana panyaya dzakasiyana. Izvo zvine hutano kuti hukama huchengetedze zvinzvimbo zvakapesana nguva nenguva. Izvi zvakakosha kana vaviri vacho vachigona kukura nekusimba.
Ushamwari pakati pevakaroorana ndehwechokwadi kana mumwe nemumwe achigamuchira mumwe sezvaari. Hazvina kunaka kuti mudiwa aedze kuita kuti manzwiro emumwe munhu asashande uye edza kumanikidza kuti ufunge sei.
Hazvidikanwi kupa mhosva varoorani nokuda kwezvikanganiso zvavanoita. Hushamwari huripo muvaviri apo vanhu vese vanotarisa nguva dzese pakutsvaga mhinduro dzematambudziko angamuka. Hazvibatsiri kugara uchipomera mudiwa.
Rusununguko chimwe chezvinhu zvakakosha kana zvasvika pakuita vaviri shamwari yepamoyo. Mumwe nemumwe ari muhukama anofanira kuremekedza mumwe uye siyai nzvimbo yakakwana yekuti muite zvakasununguka.
Vakaroorana vane ushamwari huripo vanoziva kushanda seboka. Matambudziko anokurukurwa nezvawo uye sarudzo dzakanakisa dzinoitwa.
Chinonyanya kukosha nguva dzose ndeyevakaroorana. Chinokosha kumubatsira paanenge achida uye kuziva kuti haasi oga panyaya yekugadzirisa matambudziko angamuka.
Zvinhu zvishoma zvinofadza muhupenyu huno sekuronga ramangwana nemumwe wako. Isa zvinangwa zvenguva refu uye zvinangwa chiratidzo chakajeka chekuti vaviri ava ishamwari yedu yepamoyo.
Kukwanisa kuseka pamwe chete uye kukwanisa kunakidzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzekunakidzwa chinhu chinozadza vaviri nemufaro uye anovaita shamwari dzepamwoyo. Kunakidzwa kwakabatana kunogadzira chisungo chinoshamisa pakati pevanhu vaviri icho chinonetsa kutyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Ungaziva sei kana mumwe wako ariwo shamwari yako yepamoyo
Chii chinonzi toxoplasmosis uye chinokanganisa sei pamuviri?